Umzuzu woxolo phakathi kobugcisa be-romanesque, indalo, ukuzola - I-Airbnb
Umzuzu woxolo phakathi kobugcisa be-romanesque, indalo, ukuzola
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguIlda Maria
Indawo yokuhlala enethafa kumgangatho wokuqala kwifama ehlaziyiweyo (mq.53) ibandakanya umtshato omnye, ibhedi enye yesofa, igumbi lokuhlambela elinye, ikhitshi.
Indlu esiyirentayo ingqongwe ngamaplanga kwaye ingathatha ithuba leterrace, balcony kunye negadi engasemva kwendlu. Sirenta kusapho olunye ngexesha, ngoko ke awuzukwabelana ngeendawo nabani na. Enye indawo yesakhiwo ihlala umntu omnye ongayi kudibana naye
Indlu ejikelezwe yi-greenery e-Cocconato, iflegi ye-orange Touring, eyaziwa ngokuba yi-micro-climate, inkcubeko kunye ne-gastronomy, isiseko esihle sokutyelela ubuncwane bezobugcisa obujikelezileyo.
Sayibuyisela indlu ngo-2013 ngokwemigaqo yokonga amandla kunye nokugcinwa kwendalo.
Amagumbi avuleleka kwi-terrace apho unokutya khona kwaye ubukele ukubhabha kweentaka namaxhalanga rhoqo.
Ukuhlala eCocconato kuthetha ukonwabela umbono wepanoramic ukuba indawo yayo ngokwejografi iyakuvumela, ukujonga "ngaphaya"; kuthetha ukuzifumana ngexesha lokuhamba emahlathini nakwiindawo ezingqongileyo, oko kuthetha ukumangalisa ubuhle beentyatyambo zasendle ezisekho nangona kukho ushishino. Itsheri, iapile, ipesika kunye nemithi yepere kwintyatyambo ishiya ingathethi.
Abo bathanda imbali kunye nobugcisa banokubhalwa kwiwebhusayithi yeComune di Cocconato.
Umbuki zindwendwe ngu- Ilda Maria
Sihlala kumgangatho ophantsi, kwaye sihlala sikhona, kodwa izindlu zizimele. Ngokucacileyo ukuba ulwazi lwethu olusisiseko lwesiNgesi, isiFrentshi, isiPhuthukezi esisivumelayo, siya kukuvuyela ukukwazi kangcono.
Sisibini esikhethe ukuhlala ngaphandle sonwabele ukuthula, izandi, amavumba, kodwa kwanomsebenzi onzima nokuzibandakanya nokusebenza komhlaba okukwathandatyuzwa kukudodobala kwezoqoqosho esikuyo. Ulwazi esiludingayo ukuze sitshintshe indlela esiphila ngayo kunye nendlela esizisebenzisa ngayo lusikhokelele ekubeni silime igadi yasekhitshini kunye negadi yeziqhamo ngeziphumo esiye sazenza.
kumema ukuba ubone kwaye ungcamle (yum!)
Sinokukhapha abo banqwenela ukutyelela igadi yeziqhamo, igadi kunye nemisebenzi yethu eyahlukeneyo.
Sihlala kumgangatho ophantsi, kwaye sihlala sikhona, kodwa izindlu zizimele. Ngokucacileyo ukuba ulwazi lwethu olusisiseko lwesiNgesi, isiFrentshi, isiPhuthukezi esisivumelayo, siy…
Inombolo yomthetho: 4719 del 23/11/2018
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Cocconato